Naya Post Nepal | बढ्यो आज पनि सुनको मूल्य, हेर्नुस् कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
बढ्यो आज पनि सुनको मूल्य, हेर्नुस् कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको भाउ प्रतितोलाको ९२ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएकोमा बिहीबार ५ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९२ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
तेजावी सुनको भाउ तोलाको ९२ हजार २ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यसैगरी आज चाँदीको भाउ भने स्थिर रहेको छ । बिहीबार चाँदी प्रतितोला एक हजार २५५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
आजको विदेशी मुद्राको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको विनिमयदर कति ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ४५ पैसा र विक्रीदर १२० रुपैयाँ ०५ पैसा कायम भएको छ ।
युरोपियन युरो आज एकको खरिददर १३५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३५ रुपैयाँ ६८ पैसा छ । युके पाउन्ड स्टलिङ एकको खरिददर १६१ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १६२ रुपैयाँ ६० पैसा कायम छ ।
कतारी रियालको एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ९७ पैसा छ । जापानी येन आज १० को खरिददर नेपाली १० रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ भने साउदी अरबीयन रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
२०७८ माघ २०, बिहीबार प्रकाशित0Minutes 343 Views